Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » 'Fahitana' an'ny filoha Trump ho an'ny fandriam-pahalemana Mideast
Raha nanaiky ny hifampiraharaha nifototra tamin'ny volan'ny soso-kevitra i Israel, nolavin'ny Fahefana Palestiniana tamin'ny fomba ofisialy ny rafitra
Ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump tamin'ny talata dia nanambara ny drafitra fandriam-pahalemana any Moyen-Orient efa ela, izay manondro ny Israel mitazona ny fiandrianam-pirenena amin'ny tsy fizarazarana an'i Jerosalema sy ny fampiharana izany any amoron'ny Banky Andrefana. Ny drafitra, na dia miantso ny fananganana fanjakana Palestiniana mahaleo tena aza, dia nametraka io tranga io tamin'ny famoahana fitaovam-piadiana tao Hamas, izay manapaka ny Lemak'i Gaza, ary ny fanekena an'i Israel ho firenena-firenena an'ny vahoaka jiosy.
Ny filoha Trump, nopetahan'ny praiminisitra israeliana Binyamin Netanyahu, dia niarahaba ilay tolo-kevitra ho "drafitra matotra indrindra, azo tanterahina ary amin'ny antsipiriany hatrizay, izay mety hahatonga ny israeliana, palestiniana ary ny faritra ho azo antoka kokoa ary hambinina."
Nohamafisiny fa “ankehitriny, Israel dia manao dingana lehibe ho amin'ny fandriam-pahalemana,” na dia nanamafy aza izy fa “ny fandriam-pahalemana dia mitaky marimaritra iraisana fa tsy avelantsika hisy mihitsy ny filaminan'ny Isiraely.”
Tao anatin'ny fifamatorana mafy tamin'ny Fahefana Palestiniana, nanitatra sampana oliva ny filoha Trump, naneho alahelo noho ny fahatsapany fa "voafandriky ny herisetra nandritra ny fotoana lava be ny Palestiniana." Na eo aza ny fanamelohana nataon'ny PA momba ny tolo-kevitra tsy mbola hitan'ny varahina ambony indrindra, dia nanitrikitrika ny filoha Trump fa nanolotra "fotoana azo antoka handresena" izay nanome "vahaolana teknika marina" hamaranana ny fifanolanana ny antontan-taratasy lehibe.
Mikasika izany, ny drafitra mihitsy dia mitaky ny "fitandroana ny andraikitra fiarovana israeliana [amin'ny fanjakana Palestiniana ho avy] sy ny fifehezana israeliana ny habakabaka andrefan'ny reniranon'i Jordania."
Vahaolana mety, hoy ny tolo-kevitra, “hanome ny Palestiniana ny fahefana rehetra hifehezana ny tenany fa tsy ny hery handrahonana an'i Israel.”
Amin'ny lafiny iray, Netanyahu dia nivoady fa “hifampiraharaha amin'ny fihavanana amin'ny Palestiniana mifototra amin'ny drafitra fandriam-pahalemana [filoha Trump].” Izany, na eo aza ny mpitarika israeliana miatrika valinteny mahery avy amin'ireo mpiara-dia amin'ny antoko politika ankavanana izay nanda mafy, amin'ny ankapobeny, ny fiheverana ny fanjakan'ny Palestiniana.
"Ianao [filoha Trump] no mpitondra amerikana voalohany nanaiky ny maha-zava-dehibe ny faritra ao Jodia sy Samaria [ny teny ara-Baiboly ho an'ireo faritra manodidina ny morontsiraka Andrefana] izay tena ilaina amin'ny filaminam-pirenena Israel," hoy i Netanyahu nanampy.
Notsipihany manokana fa ny drafitry ny fandriam-pahalemana dia mitaky ny fampiharana farany ny fiandrianam-pirenena israeliana amin'ireo vondrom-piarahamonina jiosy "rehetra" ao amin'ny Faritra Andrefana, ary koa ny lohasaha Jordania stratejika, izay heverin'ny fikambanana politika sy fiarovana Israeliana ho tena ilaina mba hiantohana ny filaminana maharitra amin'ny firenena.
Ny drafitry ny fandriam-pahalemana dia "mandinika fanjakana Palestiniana izay manodidina ny faritany azo ampitahaina amin'ny velarantanin'ny Faritra Andrefana sy Gaza talohan'ny 1967."
Izany hoe, talohan'ny nisamboran'ny Isiraely ireo faritra ireo avy tany Jordania sy Egypte, avy.
Tsy namela velively ny fandikana fandikan-teny i Netanyahu tamin'ny fanambarany fa hifidy ny kabinetrany amin'ny Alahady amin'ny fanakambanana ireo “faritra rehetra izay kasain'ny [fandriam-pahalemana] ho isan'ny Isiraely ary neken'ny Etazonia ekena ho isan'ny Isiraely.”
Nanamafy ihany koa ny praiminisitra israeliana fa ny drafitra dia mitaky ny hamahana ny olan'ny mpitsoa-ponenana Palestiniana ivelan'ny Israel, ary ny fanambarana fa "i Jerosalema dia hijanona ho renivohitr'i Israel iraisana."
Na eo aza izany, ny drafi-pihavanana dia heverina ho renivohitry ny fanjakana palestiniana iray “ny faritra atsinanan'i Jerosalema atsinanana izay miorina amin'ny faritra atsinanana sy avaratry ny sakana fiarovana efa misy, ao anatin'izany i Kafr Aqab, ny faritra atsinanan'ny Shuafat ary Abu Dis, ary azo antsoina hoe Al Quds na anarana hafa araka ny nofaritan'ny State of Palestine. ”
Raha ny tena izy, ny tolo-kevitra dia misy sarintany mamaritra ny sisin-tany mety hitranga eo anelanelan'ny Israel sy ny fanjakana Palestiniana. Raha nivoady ny filoha Trump fa ny faritra natokana ho an'ny PA dia hijanona ho "tsy mandroso", izay mametra ny Israel tsy hanitatra vondrom-piarahamonina jiosy efa misy any West Bank mandritra ny efa-taona farafahakeliny, nahafeno fepetra izy fa "ny fanekena [dia] ho tratra avy hatrany" noho ireo faritra ireo. hijanona eo ambany fifehezana israeliana.
"Ny fandriam-pahalemana dia tsy tokony hitaky ny fongotan'ny olona - Arabo na Jiosy - avy ao an-tranony," hoy ny drafi-pihavanana, fa "ny fananganana toy izany, izay mety hiteraka korontana sivily, dia mifanohitra amin'ny hevitra iaraha-miaina.
"Manodidina ny 97% ny israeliana ao amin'ny morontsiraka andrefana no hampiditra azy ireo amin'ny faritany israeliana akaiky azy," hoy hatrany izy io, "ary manodidina ny 97% amin'ireo Palestiniana ao amoron'i West Bank no hapetraka ao amin'ny faritany palestiniana mifanila."
Mikasika an'i Gaza, ny US “Vision… dia manome ny fahafaha-mizara ho an'ny Palestiniana faritany israeliana akaikin'i Gaza izay ahafahana manangana fotodrafitrasa haingana hamahana… manery ny filàna maha-olona, ​​ary amin'ny farany mety hahafahana manangana tanàna Palestiniana miroborobo sy tanàna izay hanampy ny mponin'i Gaza hiroborobo. ”
Ny drafitry ny fandriam-pahalemana dia mitaky ny famerenana amin'ny laoniny ny fifehezan'ny PA amin'ny enclave notantanan'i Hamas.
Mikasika ny refy isam-paritra, ny filoha Trump sy ny praiminisitra Netanyahu tamin'ny talata dia nanasongadinana ny maha-zava-dehibe ny fanatrehana ny tranon'ny ambasadaoron'ireo Emirà Arabo Mitambatra, Bahrain ary Oman.
Mazava tokoa, ilay tolo-kevitra dia milaza mazava fa ny Governemanta Trump dia “mino fa raha betsaka ny firenena Silamo sy Arabo manao normalize ny fifandraisana amin'i Israely dia hanampy amin'ny fampandrosoana vahaolana ara-drariny ny fifanolanana eo amin'ny Isiraeliana sy Palestiniana, ary hisorohana ireo radika tsy hampiasa an'io fifanolanana io. hanakorontanana ny faritra. ”
Ankoatr'izay, ny drafitra dia miantso ny fananganana komity fiarovana ny faritra izay handinika ny politika fanoherana ny fampihorohoroana ary hampiroborobo ny fiaraha-miasa amin'ny faharanitan-tsaina. Ny drafitra dia manasa ireo solontena avy any Egypte, Jordania, Saudi Arabia ary ny Emira Arabo Mitambatra hanatevin-daharana ireo mpiara-miasa israeliana sy palestiniana.
Ny elefanta goavambe tao amin'ny efitrano talohan'ny talata dia ny tsy hisian'ny solontena Palestiniana ao amin'ny White House. Na eo aza izany, na eo aza ny fiantsoana miverimberina ny filoham-pahefana Palestiniana Mahmoud Abbas, mitsikera mafy ny mpitondra Palestiniana ny drafi-pihavanana.
"Mizarazara politika i Gaza sy ny morondrano Andrefana," hoy ny fanamarihana. “I Hamas no mitantana an'i Gaza, fikambanana mpampihorohoro iray izay nitifitra balafomanga an'arivony tany Israel ary namono Israeliana an-jatony. Ao amin'ny Banky Andrefana, ny manampahefana Palestiniana dia iharan'ny andrim-panjakana tsy mahomby sy ny kolikoly endemika. Mandrisika ny fampihorohoroana ny lalàny ary mampiroborobo ny haino aman-jery mpampirisika ny haino aman-jery Palestiniana mifehy ny sekoly sy ny sekoly.
“Noho ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra sy ny fitantanan-draharaha ratsy no nahalany vola an'arivony tapitrisa dolara ary tsy afaka mivezivezy any amin'ireo faritra ireo ny famatsiam-bola hahafahan'ny Palestiniana mivoatra. Mendrika ho avy tsaratsara kokoa ny Palestiniana ary ity Vision ity dia afaka manampy azy ireo hahatratra izany ho avy izany. ”
Talohan'ny talata dia nifanaraka ny ankamaroany fa ho andraikitra goavana ny hamerenan'ny manampahefana palestiniana ny latabatra fifampiraharahana. Ankehitriny, miaraka amin'ny antso nataon'ny PA hanao fihetsiketsehana faobe any West Bank, dia nanambara tamim-panamiana ny "Deal of the Century" ny mpandalina satria nantsoina hoe efa maty ny drafitra amerikana rehefa tonga teo imason'i Ramallah.
Na eo aza izany, toa faly niresaka mivantana tamin'ny vahoaka Palestiniana ny filoha Trump.
Ny ivon'ny tolo-keviny dia ny fanangonana vola mitentina $ 50 miliara - hizara roa eo anelanelan'ny PA sy ny governemanta arabo isam-paritra - izay hampiasaina hanomezana tombony ara-toekarena ireo Palestiniana.
"Amin'ny alàlan'ny fampivelarana ny zon'ny fananana sy ny fifanarahana, ny lalàna mifehy, ny fepetra iadiana amin'ny kolikoly, ny tsena renivohitra, ny rafitra fitomboan'ny hetra ho an'ny fitomboana ary ny teti-bidin-karama ambany miaraka amin'ny fihenan'ny sakana amin'ny varotra, ity hetsi-panoherana ity dia manome vahana ny fanavaozana ny politika miaraka amin'ny fampiasam-bola amin'ny fotodrafitrasa izay manatsara ny tontolon'ny orinasa ary mandrisika ny fitomboan'ny sehatra tsy miankina ", hoy ny drafi-pihavanana.
"Hopitaly, sekoly, trano ary orinasa no hanana fidirana azo antoka amin'ny herinaratra mora vidy, rano madio ary serivisy nomerika," hoy ny fampanantenany.
Ny "Vina" amin'ny drafitra dia mety ho voafintina tsara amin'ny iray amin'ireo andalana voalohany amin'ny fampidirana azy, izay miantso ny kabary parlemantera farany nataon'ny praiminisitra Israeliana Yitzhak Rabin, "izay nanao sonia ny fifanarahana Oslo ary tamin'ny 1995 dia nanolotra ny ainy ho an'ny raharaha. ny fandriampahalemana.
"Nijery izy fa tafaray hatrany i Jerosalema teo ambany fifehezan'ny israeliana, ny ampahan'ny Banky Andrefana misy vahoaka jiosy marobe ary ny Lohasahan'i Jordania dia tafiditra ao Israel, ary ny ambiny amoron'ny West Bank, miaraka amin'i Gaza, dia lasa ambanin'ny fizakan-tena sivily palestiniana nilaza fa ho zavatra 'kely noho ny fanjakana.'
“Ny fahitan'i Rabin,” hoy hatrany ny tolo-kevitra, “no fototra nankatoavan'ny Knesset [Parlemanta Israeliana] ny fifanarahana Oslo, ary tsy nolavin'ny mpitondra Palestiniana tamin'izany fotoana izany.”
Raha fintinina, toa nitodika tany amin'ny fahitana taloha i Etazonia amin'ny fanantenana ny hananganana ho avy tsaratsara kokoa, na tsy azo inoana.
Azo jerena ny atin'ny drafitry ny fandriam-pahalemana Eto.
Nosoratan'i Felice Friedson & Charles Bybelezer / The Media Line